January 2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 Jan 31, 2019 0
Dhuuxa Wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, sabtida mooyaane, waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa wareysiyada…
Gaashaanle Sare oo katirsan Dowladda Oo Muqdisho Lagu dilay.
Rag hubeysan ayaa magaalada Muqdisho ku dilay gaashaanle sare oo katirsan ciidamada dowladda federaalka, kaas oo naxdin iyo argagax ku noqotay dowladda. Degmada Xamar-weyne ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu dilay gaashaanle sare…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka Duhurnimo ee Radio Alfurqaan. Halkan Ka Dhageyso Warka duhurnimo 31 01 2019
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka Subaxnimo ee Radio Alfurqaan. Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 31 01 2019
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka Subaxnimo ee Radio Alfurqaan.
Inkabadan 10 Askari oo katirsan dowladda Oo lagu dilay Howlgallo ka dhacay Shabeellaha-hoose.
Saacadihii lasoo dhaafay, howlgallo kala duwan ayaa ka dhacay qeybo kamid ah gobolka Shabeellaha-hoose, kuwaas oo lala beegsaday ciidamo katirsan dowladda federaalka. Inta u dhexeysa deegaannada Dhanaane iyo Jaziira ee u dhexeeya…
Milliteriga dalka Suudaan oo ballanqaaday ilaalinta dowladda uu hogaamiyo Al-bashiir.
Iyadoo inkabadan hal bil oo kaamil ah ay banaanbaxyo waaweyn ka socdaan wadanka Suudaan, kuwaas oo looga soo horjeedo xukuumadda Al-bashiir, ayaa milliteriga dalkaas wuxuu wacad ku maray iney ilaalin doonaan jiritaanka dowladda. Kulan ay…
cusmaan	 Jan 30, 2019 0
Dhuuxa Wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, sabtida mooyaane, waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah.Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada. 30…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka Duhurnimo ee Radio Alfurqaan. Halkaan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 30 01 2019
Maamulka Aala-sucuud iyo Xuuthiyiinta oo maxaabiis is dhaafsaday.
Sida uu baahiyay telefeshin ku hadla afka Xuuthiyiinta, malleeshiyaadka ayaa sii daayay askari Aala-sucuud katirsan, kaas oo mudooyinkii u dambeeyay isagoo xanuunsan ku jiray gacanta malleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Askariga lasii daayay…